Doleshwor Daily:: Bhaktapur Daily News, Nepali News,News of Nepal, Nepal Updates
काठमाडौँ । नेपालमा सन् २०२० को एक तथ्याङ अनुसार एचआइभी÷एड्सबाट प्रभावितकोे महिलाका् संख्या ११ हजार ९१६ जना रहेको देखाउँछ । प्रभावित पुरुषको सङ्ख्या पनि १७ हजार ५८७ जना तथ्याङ्क छ । महिलाको हकमा यदि एचआइभी/एड्स सङ्क्रमण भएको थाह भए घरमा मात्र होइन, समाजबाटै तिरस्कृत हुनुपर्ने अवस्था अझै रहेको अभियन्ता नातीसरा राईको अनुभव छ । विगत दस...
काठमाडौं । प्रहरीको गोलीले एकजना अश्वेत युवाको मृत्यु भएपछि बढेको तनावका कारण अमेरिकाका दुईवटा सहरका मेयरहरूले त्यहाँ आपतकाल घोषणा गरेका छन्। मिनियापलिस र सेन्ट पलका मेयरहरूले आफ्ना
काठमाडौं । सडक विभागले काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि आगामी असार मसान्तसम्ममा थप पाँच स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै उपत्यकाको जडीबुटी,
दोलखा । गए राति साढे १० दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका–४ मा गाडी दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा परेर ४ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । मृत्यु हुनेमा बिगु–३ घर भएका ३५
प्रेम गीत-३’ हिन्दीमा डबिङ, भारतमा पनि रिलिज हुने
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘प्रेम गीत-३’ हिन्दी भाषामा डबिङ गरिएको छ। स्वर्गीय छेतन गुरूङ र सन्तोष सेनले निर्माण गरेको यो चलचित्र हिन्दी डबिङपछि भारतमा पनि रिलिज गरिनेछ।
बसको ठक्करबाट १ जनाको मृत्यु
बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा बसको ठक्करबाट १ जनाको मृत्यु भएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ९४१ नम्बरको बसले सोही दिशातर्फ गइरहेको लु २४ प ९७६८ नम्बरको
धर्म । महर्षि वाल्मीकि आदिकाव्य रामायणका रचनाकार हुन् । उनी संस्कृत साहित्यका महाकवि पनि हुन् । यिनी लौकिक संस्कृतका विशिष्ट प्रतिभाका रूपमा परिचित छन् । यिनले सप्तर्षिबाट जीवन दीक्षा
छात्रालाई अभद्र गर्ने शिक्षक पक्राउ
हेटौंडा । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रामाथि अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा मकवानपुरगढी गाउँपालिका–३ स्थित भानु माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी
‘हनी ट्र्याप’को जालो कायमै
काठमाडौँ । हनी ट्र्याप’मा फसाइ रकम असुलेको आरोपमा महिलासहित तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जाजरकोट घर भइ गोंगबू बस्‍ने २८ वर्षीया संगीता शाह ९रितु०, सिन्धुपाल्चोक
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनद्धारा चितवनमा निर्माणधिन गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सहयोग सम्झौता
काठमाडौं । मुलुकमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका हत्या, हिंसा, बलात्कारविरुद्व नेपाल महिला संघले शान्तिबाटिका रत्नपार्कमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मीले पत्रकार
भारततर्फ चोरी निकासी बढ्योः आयल निगमले दियो कडा निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल आयाल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको चोरी निकासी रोक्न आफ्ना सबै प्रादेशिक कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ । पछिल्लो समय सीमा, नाका क्षेत्रबाट भारत तर्फ पेट्रोलियम
सरकारले परियारलाई हटाएर झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्यो
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सरकारले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा
विवाद समाधान नहुँदासम्म निर्वाचन हुन नसक्ने प्रचण्डको दाबी
काठमाडौं । नेकपा दाहाल पक्षले दलको विवाद टुंगो नलगाई कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्ने प्रश्न निर्वाचन आयोगलाई गरेको छ । आइतबार निर्वाचन आचार संहिताबारे निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा नेता
ट्रक र माइक्रोबस ठोकिदा दुई जनाको मृत्यु
धादिङ । जिल्लाको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–७ चरौँदीमा ट्रक र माइक्रोबस ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान नवलपरासीबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बा३ख ८४ नंको माइक्रोबस
राजधानीमा खानेपानीः ४३ करोड माग, आपूर्ति आठ करोड लिटर
काठमाडौँ– मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर खानेपानीको आवश्यकता छ तर आपूर्ति भने वर्षातमा १५ करोड लिटर र हिउँदमा आठ करोड लिटरमात्र भइरहेको छ । वीरशम्शेरको
ट्राफिक जाम र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना २०७७ तयार भएको छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीम
सूर्यविनायक नगरपालिकाद्धारा टोल-टोलमा कन्ट्रयाक ट्रेसिङ्ग सुरु
भक्तपुर । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिनबाट रोक्न भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले टोलटोलमा कन्ट्रयाक ट्रेसिङ्ग सुरु गरेको छ । सोमबार सूर्यविनायक चोकमा स्वाब संकलन
आजसम्म ३८ हजार ५ सय नेपालीलाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । देशभर कोरोना संक्रमित हुने नेपालीको संख्या ३८,५६१ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३४८ महिला र ८७३ पुरुष गरी जम्मा १२२१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य
अमलेखगञ्ज र वीरगगञ्जमा कार्यरत निगमका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपो र वीरगगञ्ज कार्यालयमा कार्यरत निगमका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । देशका अधिकांश स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने अमलेखगञ्ज
भक्तपुर । भक्तपुरमा एक आमाले आफ्रनै शिसुको हत्या गरेकी छिन् । पाल्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले चार दिनकी शिसुको मुखमा कपडा कोचेर हत्या गरेकी हुन् । महानगरीय प्रहरी बृत्त जगातीका
भक्तपुर । भक्तपुरमा सुरक्षा डिउटीमा बसेका एक प्रहरी नायव निरिक्षक (सई)को सवारी दुर्घट्नामा परेर ज्यान गएको छ । सोमवारी राती करिव साढे नौ वजे अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत मध्यपुर ठिमी न.पा ४
बन्चरो प्रहार गरी बाबुआमाको हत्या
तेह्रथुम । तेह्रथुमका एक युवाले बन्चरो प्रहार गरी बाबुआमाको हत्या गरेका छन् । जिल्लाको फेदाप गाउँपालिका–५ इसिबुका २० वर्षीय कञ्चन लिम्बूले बिहीबार साँझ बुबाआमाको हत्या गरेका हुन् ।
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकका दुई युवा बन्दुक सहित पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मृग जस्तै देखिने जंगली जनावर मारेको आरोपमा दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
भक्तपुरमा जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समिति
भक्तपुर । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड १९ को सन्दर्भमा अधिकार ब्यवस्था अनुगमनका लागि नेटवर्क गठन गरी चार तहका समिति गठन गर्ने निर्णय अनुसार भक्तपुर जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार
नयाँदिल्ली । भारतको मुम्बईमा कार्यरत ५३ जना सञ्चारकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनले पछिल्लो पटक गरिएको परीक्षणमा ती सञ्चारकर्मीमा कोरोना
दल, वाद र व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रहितमा लागौं
दधिराम गेलाल भक्तपुर । जय नेपाल, जय मातृभूमि, जय देश भन्यो कि, भिन्न मत राखेको वा वाम विचारधारामा विचलन आएको देख्ने नजर समाजमा निकै ठुलो छ । आफू परियो बिहान उठ्ने बितिक्कै सगरमाथा
भक्तपुर । निर्माण व्यवसायी संघ भक्तपुरको अध्यक्षमा राजकुमार बस्ताकोटी चयन भएका छन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको संघको १९ साधारणसभा तथा ७ औं अधिवेशनको शनिबार सम्पन्न भएको बन्द सत्रले
भौतिक पुर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङका १०० दिन : काठमाडौमा ९५०० खाल्डा पुरिए, दुई सय किमि सडक कालोपत्रे
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले आफ्नो एक सय दिनको प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री नेम्वाङले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरु खाल्डा खुल्डीमुक्त र
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा अध्ययनरत प्रदेश एकका विद्यार्थी संगठित
काठमाडौँ । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागमा अध्ययनरत प्रदेश नं. १ का विद्यार्थी संगठित भएका छन् । प्रदेशका १४ वटा जिल्लाका विभिन्न गाउँ र शहरबाट त्रिवि
विप्लव माओवादीका दुई जना कार्यकर्ता पक्राउ
भक्तपुर । भक्तपुरमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई जना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । शंकास्पद गतिविधि गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा
सूर्यविनायक–जडिबुटी सडक खण्डमा लेन प्रयोगको नयाँ नियम
काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले सूर्यविनायक–जडिबुटी ६ लेन सडक खण्डमा यात्रुबाहक, मालबाहक र कम गतिमा गुड्ने सवारी साधनहरू बायाँ लेनबाट मात्र गुड्न पाउने नयाँ व्यवस्ता लागू गरेको छ । नयाँ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका ढुंगेधारा र पोखरीहरुको संरक्षण गर्ने खानेपानी मन्त्रालयको योजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
विष्फोटक पदार्थ सहित पाँच जना पक्राउ
संखुवासभा । संखुवासभाबाट बिभिन्न विष्फोटक पदार्थ सहित पाँच जना पक्राउ परेका छन् । चैनपुर नगरपालिका १ गुफापोखरीस्थित दोभानेबाट सकेट बम १ थान, रेडबुल बम १ थान र बिभिन्न कागजातहरु सहित ५
नोवेल कोरोना भइरस विरुद्ध भक्तपुर रेडक्रसको अभियान
भक्तपुर । नोवेल कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा नागरिकहरुलाई सचेतना जगाउने उद्देश्यले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भक्तपुरले बिषेश अभियान शूरु गरेको छ । भाइरस लागेको थाहा पाउने मुख्य लक्षण, आफु
सूर्यविनायक ७ नं. वडा गुण्डू पूर्णसरसफाइ वडा बन्ने
भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं.७ (गुण्डू) पूर्णसरसफाइ वडा निर्माण हुने भएको छ । शनिवार गुण्डू स्वास्थ्य चौकीमा भएको वडास्त्तरीय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छन्दता समन्वय
खप्तडी बुढाथोकी क्षेत्री सेवा समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक
धनुषा । खप्तडी बुढाथोकी क्षेत्री सेवा समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको दुई दिने बैठक आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ पार्ने लगायत बिभिन्न भावी नीति तय गर्दै सम्पन्न भएको छ । माघ १० र ११ गते प्रदेश
खेलकुद बिकास समिति भक्तपुरमा श्रीभक्त काशीछवा
भक्तपुर । जिल्ला खेलकुद बिकास समिति भक्तपुरको अध्यक्षमा श्रीभक्त काशीछवा नियुक्त हुनु भएको छ । बाग्मती प्रदेश खेलकुद बिकास परिषद्ले आफ्ना १३ वटै जिल्लाका जिल्ला खेलकुद बिकास समिति
अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी अब्बल – प्रहरी महानिरीक्षक खनाल
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी अब्बल रहेको बताउँनुु भएको छ । समुदाय–प्रहरी
भक्तपुरमा ठुलो परिमाणमा लागूऔषध सहित दुई पक्राउ
भक्तपुर । भक्तपुरबाट प्रहरीले ठुलो परिमाणमा लागू औषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । भक्तपुर नगरपालिका ४ भेलुखेलका राजन भेलेलाई नियन्त्रित लागूऔषध फेनरागन, नुर्फिन र डाईजेल्याप
राजबीराज । एउटा कलमको मूल्य सयदेखि हजारसम्म अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, सप्तरीमा बिक्री तथा हस्तान्तरण भएको एउटा कलमको मूल्य एक लाखभन्दा बढी छ । प्रत्येक वर्ष चित्रगुप्त पूजाको अवसरमा
काठमाडौं । खाडी मुलुक कतारले आफ्नो देशमा काम गर्न आउने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकको दर तोकेको छ । साथै काफला पद्धती हटाइएको निर्णय पनि गरेको छ । सबै देशका कामदारलाई समानरुपमा लागू
नक्कली सुन देखाई ठगी गरेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ
काठमाडौं । सक्कली जस्तो देखिने १ किलो नक्कली सुन देखाई ठगी गरेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरुमा काठमाडौं कपन बस्ने सिन्धुपाल्चोक वाह्रविसे नगरपालिका २ घर भएकाहरू
नक्कली नोट बनाउने मेशिन सहित तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । रजाधानीबाट नक्कली नोट बनाउंने मेशिनसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । नक्कली नोट बनाउन प्रयोग हुने विभिन्न समानहरू सहित ३ जनालाई सोमबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ
पर्वतको प्रहरी चौकी भंगरालाई तीन रोपनी जग्गा निःशुल्क
पर्वत । पर्वतको एक प्रहरी कार्यालयलाई तीन रोपनी जग्गा निःशुल्क प्राप्त भएको छ । जिल्लाकौ प्रहरी चौकी भंगराको भवन निर्माण गर्न ३ रोपनी जग्गा निःशुल्क प्राप्त भएको हो । स्थानीय
राप्रपा बैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउँछ ःअध्यक्ष थापा
भक्तपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा बैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउने दाबी गरेका छन् । राप्रपा मध्यपुर नगर कार्यसमितिले पार्टीका भक्तपुरका संस्थापक नेता
भक्तपुर । गायक राममणी फुयाँलको “तर बाँसुरी मनको” गीतको भिडियो रिलिज भएको छ । गीतमा गायक फुयाँलको अफ्नै शब्द र संगित रहेको गीतमा स्वर सुजता तिमिल्सिनाको रहेको छ । गीतको भिडियोमा
वडा अध्यक्ष गुरुङको निधन
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका–१६ का वडा अध्यक्ष चतुरमान गुरुङको निधन भएको छ । क्यान्सर रोगबाट पिडित गुरुङको शनिबार बिहान उपचारका क्रममा निधन भएको हो । क्यान्सरका बिरामी गुरुङको
स्कुटर दुर्घटनामा परेर दुई प्रहरी घाइते
भक्तपुर । भक्तपुरमा स्कुटर दुर्घटनामा परेर २ प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा स्कुटर चालक महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा कार्यरत प्रहरी नायब निरिक्षक श्याममणी पोखरेल र प्रहरी
साकुरा बहुउद्देश्यीय सहकारीको मुनाफा २३ लाख
भक्तपुर । भक्तपुरको सुर्यविनायकस्थित साकुरा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले गएको आर्थिक वर्ष २३ लाख रुपियाँ मुनाफा गरेको छ । सहकारीको चौथो साधारणसभाका अवसरमा शनिबार सो जानकारी
कागेश्वरी मनोहरामा विश्वकै ठूलो काग निर्माण हुने
काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा विश्वकै ठूलो पञ्चरत्न धातुको काग निर्माण गरिने भएको छ । नगरपालिकाको लोकतान्त्रिक सहिद पार्कमा दुई हजार किलोको काग निर्माण गर्न लागिएको हो ।
उदाहरणीय जनप्रतिनिधि : आफ्नो लागि सवारीसाधन खरीद गर्ने बजेटले दुईवटा एम्बुलेन्स खरिद
काभ्रेपलाञ्चोक। काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी बर्तौलाले आफूलाई सवारीसाधन खरीद गर्न छुट्याइएको रकमले दुई वटा एम्बुलेन्स खरीद गर्न लागेकी छन् । उनको यस
साना–होटल व्यवसायीका समस्यै–समस्या, अपराध नियन्त्रणकालागि आचारसंहिता बनाइने
भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिका क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रणकालागि एकै किसिमको आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्न व्यवसायी तयार भएका छन् । खाजा घर र साना होटलमा विक्री हुने मदिराका कारण
ग्राण्डी अस्पतालले दोर्जे दम्पतीलाई दिएको पीडा
काठमाडौं । बिरामीका लागि चिकित्सक भगवान हुन्। तिनै भगवान (चिकित्सक) ले नै बिरामीलाई मृत्युको मुखबाट फर्काएर नयाँ जीवन दिन्छन्, दिएका पनि छन्। तर कहिलेकाहीँ तिनै भगवान (चिकित्सक) को एउटा
जुवातास खेलिरहेका ४० जना पक्राउ
भक्तपुर । भक्तपुर, काठमाडौं, काभ्रेबाट जुवातास खेल्ने ४० जना पक्राउ परेका छन् । भक्तपुरको सूर्यबिनायक नगरपालिका ५ सल्लाघारीस्थित रामकृष्ण तोयनाको घरमा जुवातास खेलिरहेका
एपीएफ टोलीद्वारा दुई वटा कटुवा पेस्तोल बरामद
जनकपुर . एपिएफ टोलीले धनुषा र सिराहाबाट दुई थान पैस्तोल बामद गरेको छ । टोलीले धनुषा जिल्लाको कमला नगरपालिका ९ दुवरकोटबाट एउटा कटुवा पेस्तोल, एउटा खुर्पा जस्तो देखिने धारिलो बस्तु
एसओएसकी आमासहित १७ जनालाई दीर्घसेवा सम्मान
भक्तपुर । अभिभावक गुमाएर एसओएस वालग्राम सानोठिमीमा आश्रीत वालवालिकाको स्याहारसुसार गर्ने दुईजना आमा सहित शिक्षक र कर्मचारी गरी १७ जनालाई सम्मानित गरिएको छ । वालवालिकाको
जापानको सहयोगमा निर्मित मेलमिलाप केन्द्र उद्घाटन
भक्तपुर । जापान सरकारको सहयोगमा भक्तपुर जिल्ला अदालत परिषरमा मेलमिलाप केन्द्र निर्माण भएको छ । नेपाल बार एशोसियसन भक्तपुर, उच्च अदालत बार पाटन, ललितपुर बार एशोसियसनले भक्तपुर बारमा आज
भक्तपुरको फन भ्यालीमा धमिलो पानी प्रयोग गरेको गुनासो, जनस्वास्थ्यमा गम्भिर खेलवाड
भक्तपुर । सर्वसाधारणलै भक्तपुरको पलांसेस्थित फन भ्यालीमा धमिलो पानी प्रयोग गरेको गुनासो गरेका छन् । सोमवार फनभ्यालीमा बच्चा लिएर पुगेका सुर्यविनायक –७ का सुभाष श्रेष्ठका अनुसार,
जिल्लास्तरीय उपशाखा गोष्ठी सम्पन्न
नगरकोट । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखाको आयोजनामा जिल्लास्तरीय उपशाखा गोष्ठी धुलिखेलमा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, १८ वटा उपशाखाका सभापति
अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र सरकारी वकिलहरुको दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजना र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सिंहदरबारको सहकार्यमा काठमाडौं बसुन्धरास्थित बसुन्धरा व्याङ्केटमा संचालित अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र
उद्योगको भवन बनाउने क्रममा तीन मजदुरको मृत्यु
दाङ । दाङमा घर बनाउँने क्रममा बिम भांचिदा तीन मजदुरको ज्यान गएको छ । लमही नगरपालिका–७ कमानपुरस्थित सम्राट सिमेन्ट कम्पनीको नयाँ भवन बनाउने क्रममा बिम भत्किँदा ३ जनाको मृत्यु भएको
डेँगु विरुद्ध सचेतना तीब्र पार्दै नेपाल रेडक्रस
सुनसरी । धरानमा एक महिना देखि देखा परेको डेँगुले धेरै सर्वसाधारणलाई प्रभावित पारेपछि नेपाल रेडक्रसले डेँगु विरुद्ध सचेतना तीब्र पारेको छ । रेडक्रसको स्थानीय विपद व्यवस्थापन
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भुकम्प पिडितका लागि छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणको स्थलगत लगत संकलन गर्ने कार्य असार १५ गतेसम्म गर्ने भएको छ । यसअघि जेठ मसान्तसम्म
राजधानीमा भारतीय शैक्षिक मेला शुरु
काठमाडौं । ‘भारतीय शैक्षिक मेला २०१९’ राजधानीमा शुरु भएको छ । भारतका प्रतिष्ठित कलेज तथा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै
आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण ः अधिकारी
काठमाडौं । टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले समाजलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न सहकारी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । नगरपालिकाको सहकारी संस्था
कपडा तथा सिलाई व्यवसायीद्धारा प्रजिअलाई ज्ञापन पत्र
भक्तपुर । नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ जिल्ला शाखा भक्तपुरले विभिन्न माग राखी जिल्ला प्रशासान कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट समक्ष ज्ञापन पत्र
काठमाडौं । माछापुच्छ«े बैंकले प्रदेश नंं १ का सुनसरी र झापा जिल्लामा थप ४ शाखा कार्यालय शुभारम्भ गरेको छ । बैंकले सुनसरीको इनरुवा नगरपालीकास्थित इनरुवा र सोहि जिल्लाकै
आगलागीबाट करिब ५ करोड ६० लाखको धनमाल नष्ट
भक्तपुर । देशका ६ स्थानमा आगलागी हुँदा करिब ५ करोड ६० लाखरुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ । ईलाम, काठमाडौं, दाङ, धनुषा, सिराहा र भक्तपुरमा भएका छुट्टाछुट्टै आगलागीमा सो क्षति भएको
विनायक शिक्षामा रेडक्रस अभिमुखिकरण कार्यक्रम
भक्तपुर । मध्यपुर थिमिस्थित विनायक शिक्षा निकेतन. ई. सेकेण्डरी स्कूलमा विनायक युवा रेडक्रस सर्कलका नयाँ कार्यसमितिका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम आयौजना गरिएकोछ । नेपाल रेडक्रस
बारा । भारत तथा नेपालका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गरेर वेचबिखन गर्ने कार्यमा संलग्न ५ जनालाई बाराबाट पक्राउ गरिएकोछ । जिल्लाकौ गढी गाउँपालिका २ दौरवा मठबाट चोरी गरेको
आफ्नै श्रीमतीलाई इँटा प्रहार गरी हत्या
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुमा एक जनाले आफ्नै श्रीमतिलाई ईंटा प्रहार गरी हत्या गरेका छन् । आफ्नै ३९ वर्षीया श्रीमती गीता चौधरीलाई इँटा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा बाणगंगा
भक्तपुर । भक्तपुरबाट तास खेल्ने छ जना पक्राउ परेका छन् । भक्तपुर नगरपालिका ५ कमलबिनायकस्थित रामेछाप चुनापट्टी गाउँपालिका ४ घर भएका ४९ वर्षीय डम्बर बहादुर लामाको खाजा पसलबाट उनीहरु
डिउटीका प्रहरीमाथि हातपात गर्ने खोरमा
उदयपुर । उदयपुरको कटारीमा डिउटीमा खटिएको प्रहरीमाथि हातपात गर्ने चार जना प्रहरी खोरमा परेका छन् । कटारी नगरपालिका ६ स्थित बिहीबारे भन्ने स्थानमा डिउटीमा खटिएको प्रहरीमाथि
वेवारिशे अवस्थामा भरुवा बन्दुक फेला
दोलखा । दोलखाबाट एक बेवारिस भरुवा बन्दुक फेला परेको छ । जिल्लाको भिमेश्वर नगरपालिका ६ घोडेढुंगास्थित खोरथली सामुदायिक बनको ठुलो ढुङगाको ओडारमा वेवारिशे अवस्थामा रहेको भरूवा बन्दुक
विनायकमा अभिभावक सचेतना कार्यक्रम
भक्तपुर । विनायक शिक्षा निकेतन ईङलिस सेकेण्डरी स्कूलले अभिभावक सचेतना कार्यक्रमको पहिलो चरण सम्पन्न गरेको छ । विद्यालयले शैक्षिक सत्र २०७६ अन्तर्गत पूर्व माध्यामिक तह र कक्षा १
भक्तपुर । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका, ७ नम्बर वडा कार्यालयले किसानलाई अनुदानमा उन्नत जातको फुलका वेर्ना वितरण गरेको छ । वडामा फैलँदो व्यवसायिक फुल खेतीलाई थप विस्तार गर्न र
अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने तयारी गर्दै युनियन
काठमाडौं । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि सरकारले ल्याएको विधेयक, पाइपलाइनमा रहेका अन्य मिडिया सम्बन्धी कानुन र सरकारी सञ्चारमाध्यममा अख्तियार गरिएको सरकारको सेन्सरसीप नीतिविरुद्ध नेपाल
नेकपाका जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जको टुङ्गो लगाइने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बिहीबार जिल्ला कमिटीको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज टुङ्गो लगाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले जिल्ला
विज्ञान क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने दुई संस्था र १८ जना पुरस्कृत
काठमाडाैँ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा योगदान पु-याउने २० व्यक्ति र संंस्थालाई पुरस्कृत गरेको छ । प्राज्ञसभाको निर्णय बमोजिम
मेयरको धम्कीपछि सुनसरीका पत्रकारले प्रशासनमा सुरक्षा मागे
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले पत्रकारलाई धम्क्याएपछि बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखाले सुरक्षा माग गर्दै प्रहरी र प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण पत्र
पेट्रोलको मूल्य एक रुपैयाँ घट्यो
भक्तपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाएको छ । निगमले बुधबार रातिबाट लागू हुने गरी मूल्य घटाएकाे हाे । मूल्य घटेपछि बिहीबार बिहानबाट काठमाडौं उपत्यकामा
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भक्तपुरबाट शुरू हुने
भक्तपुर । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भक्तपुरबाट शुभारम्भ हुने भएको छ। देशमा रहेको बेरोजगार समस्या समाधान गर्न सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भक्तपुरबाट
नेटवर्किङबाट ठगी गर्ने आठ जना पक्राउ
काठमाडौं । गैरकानुनी रुपमा नेटवर्किङ व्यवसाय संचालन गरी ठगी गर्ने ८ जनालाई महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा भारत उतरप्रदेश
श्रोत नखुलेको ११ लाखसहित दुई जना पक्राउ
बारा । बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिका १ बैरियास्थित सिमा ईलाकाबाट स्रोत नखुलेको १० लाख ९६ हजार ६ सय २५ रुँपैयासहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा बारा जिल्लाको
सवारी दुर्घटनामा नौ जनाको मृत्यु
भक्तपुर । काठमाडौं, सर्लाही, रुपन्देही, कपिलबस्तु, सिन्धुपाल्चोक, सिराहा, रुपन्देही, पाचँथर र धनुषामा भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौं
‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ लाई प्रभावकारी बनाइने
काठमाडौँ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । सङ्घीय संसद्को शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि सरकारको
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइने भएको छ। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महिनावारी भएका समयमा
कब्जामा परेको सरकारी जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता गरिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी एक वर्ष भित्र कब्जामा परेका सबै सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा
खानेपानी, ढल र फोहोरका समस्या सुल्झाउँछु : प्रेमबहादुर कुटु
भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–३ ले नगरकै सबैभन्दा बढी कर संकलन हुने व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रको परिचय बनाएको छ । अरनिको राजमार्गको लोकन्थलीदेखि क्षयरोग निवारण
नव नियुक्त प्रहरी निरीक्षकलाई दर्ज्यानी चिन्ह
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको निरिक्षकमा नव नियुक्त अधिकृतहरुलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले खुला प्रतियोगिताद्वारा जनपद प्रहरी समूहतर्फ
राजधानीमा भुकम्पको धक्का महसुस
भक्तपुर । बुधवार बिहानै राजधानीमा भुकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । बिहान छ वजेर ३० मिनेट जाँदा राजधानीमा भुकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो । सवेरै भुकम्पले हल्लाएपछि सर्वसाधारण आत्तिएर
सुरक्षा चुनौति समाधान गर्न प्रहरी सक्षम ः प्रहरी महानिरीक्षक खनाल
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणका साथै विकासका गतिविधिमा देखिएका सुरक्षा चुनौतीमा सामना गर्न प्रहरी सक्षम रहेको बताउनुभएको छ ।
यी हुन् श्रीमान्-श्रीमतीको झगडाका कारण
काठमाडौं । प्राय मानिसहरु विवाह अघि विवाहित जीवन धेरै सुन्दर हुने कल्पना गर्छन् । तर विवाहपछि स-साना कुरामा जीवनसाथीसँग झगडा पर्न थाल्छ । तपाईको पनि जीवनसाथीसँग झगडा चलिरहेको छ भने
यसरी गर्छ मदिराले जीवन वर्वाद, लाग्छन् यस्ता रोग
काठमाडौं । मदिरा सेवन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो । यसको लतले व्यक्तिका साथै उसका परिवारलाई पनि हानी गर्छ । अब वैज्ञानिहरुले शोध गरेर मदिराका दुष्परिणाम बारे बताएका छन् । एक शोधका
विश्वकप क्रिकेट २०१९का प्रमुख खेलाडीहरु
काठमाडौं । अबको करिब महिना दिनमा क्रिकेटको विश्वकप शुरु हुँदैछ । यो प्रतियोगितामा १० मुलुकले भाग लिनेछन् । यो विश्वकप इंगल्याण्ड र वेल्समा हुँदैछ । यो प्रतियोगितामा ४८ ओटा खेल हुनेछन् ।
शिक्षक लाइसेन्स फारम अनलाइनबाट भर्न सकिने, यसरी भर्नुहोस् !
शिक्षक सेवा आयोगले पहिलोपटक अनलाइन मार्फत अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन दरखास्त लिने भएको छ । आयोगले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी ३ वटै तहको अध्यापन अनुमति पत्रको
घुर्नुहुन्छ ? उच्च रक्तचाप पो छ कि !
धेरै मानिसको सुतेको समयमा घुर्ने र निद्रामा अचानक आत्तिँदै उठ्ने बानी हुन्छ । सधैँ घुरिरहने भएकाले हामी धेरैजसोले यसलाई समस्याका रूपमा लिइरहेका हुँदैनौँ । सुताइमा अप्ठ्यारोपनका कारण
नयाँ वर्ष गन्तव्य : राताम्मे टीएमजे
भीम देवान । मनसँग मन मिले संसारै उज्यालो लाग्छ । त्यही मन नमिल्दा कत्तिका जिन्दगी उजाड बनेका छन् । मनलाई सम्हाल्ने, मनलाई जोड्ने र मनलाई बाँध्ने केही छ भने त्यो प्रकृति नै हो ।
हावाहुरी प्रभावितलाई सुर्यविनायक नगरपालिकाले तीन रुपैयाँ दिने
भक्तपुर । भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिकाले बारा र पर्साका हावाहुरीबाट प्रभािवत परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ राहत सहयोग दिने भएको छ । नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार राहत उपलब्ध गराउने
यसरी नापिँदैछ सगरमाथाको उचाइ
काठमाण्डौ । नेपालले पहिलो पटक आफैले आधिकारिक रुपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न लागेको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका चारजना कर्मचारीको टोली एक महिनामा सगरमाथाको उचाइ नापेर
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरुले पहिलोपटक रहस्यमयी मानिएको ब्ल्याकहोलको तस्वीर लिएका छन् । प्रकाशलाई आफूभित्रै समाहित गर्ने ब्ल्याकहोलको तस्वीर लिनु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । द इभेन्ट
मध्यपुरथिमिको सांस्कृतिक गुरुयोजना बन्दै
भक्तपुुर । भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले सांस्कृतिक सम्पदाको खोज, अनुसन्धान र संरक्षणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ । नगरपालिकालाई सांस्कृतिक नगरी घोषणा गरिसकिएकाले
जिब्रो छेडाउने व्यक्तिको अभाव, सातौं पटक जिब्रो छेड्दै बुद्धकृष्ण
भक्तपुर । बिस्का अर्थात बिस्केट जात्रा अन्तर्गतको भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित बोदेमा जिब्रो छेड्ने जात्रामा यस वर्ष पनि बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठले नै जिब्रो छेड्ने भएका
भक्तपुर । भक्तपुरको प्रसिद्ध विस्केट जात्रा बुधबारबाट सुरु भएको छ । नयाँ वर्षको आगमनसँगै नौ दिनसम्म तान्त्रिक विधि अनुसार मनाइने प्रसिद्ध बिस्का अर्थात बिस्केट जात्राको पहिलो दिन आज
सवारी दुर्घटनामा एकको मत्यु
भक्तपुर । भक्तपुरमा आज भएको सडक दुर्घट्नामा एक जनाको ज्यान गएको छ । मध्यपुर थिमी नगरपालिका–२ सानोठिमीस्थित डिभिजन वन कार्यालय नजिकैको ओरालोमा आज दुई वटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोकिएर
सीटीईभीटी को ३१ औं वार्षिकोत्सव, अवको युग प्राविधिक शिक्षाको युग–मन्त्री पोखरेल
भक्तपुर । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले अवको युग प्राविधिक शिक्षाको युग भएको बताउनुभएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) को ३१
भक्तपुरमा प्याराग्लाईडिङको परिक्षण
भक्तपुर । पर्यटन पवद्र्धन गर्ने उदेश्यले भक्तपुरमा प्याराग्लाईडिङ शुरु हुने भएको छ । यसै क्रममा शनिवार सुर्यबिनायकको रानीकोटबाट परिक्षणका रुपमा उडाइएको प्याराग्लाईडिङ गुण्डुमा
स्वाइन फ्ल्युबाट ३७७ को मृत्यु
नयाँ दिल्ली । भारतमा सन् २०१९ यता १२ हजारभन्दा बढी स्वाइन फ्ल्युका बिरामी भेटिएका छन् । बिरामी भएकामध्ये ३ सय ७७ जनाको मृत्यु भएको छ । राजधानी नयाँ दिल्लीमा मात्रै लगातार फैलिँदै गएको
नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग कलेज नगरपालिकाले संचालन गर्ने
भक्तपुर । विवादित नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग कलेज चाँगुनारायण नगरपालिकाले संचालन गर्ने भएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले सो कलेज नगरपालिकाबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने
५० स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्न बाँकी
भक्तपुर । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अव ५० स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पु¥याउने
फुटसलमा मदरल्याण्ड र ग्लोबल स्कुल विजेता
भक्तपुर । एडिफाई प्राइवेट स्कुल्स अर्गनाइजेशन नेपाल (इप्सन) भक्तपुरको बोर्ड कार्यक्रम अन्तर्गत सूर्योदय सेकेण्डरी स्कुलले आयोजना गरेको फुटसल प्रतियोगितामा जुनिएर तर्फ मदरल्याण्ड
स्वाइन फ्लुबाट ११ जनाको मृत्यु
नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा स्वाइन फ्लुबाट ११ जनाको ज्यान गएको छ । यस बर्षको शुरूदेखि हालसम्म स्वाईन फ्लुबाट ११ जनाको मृत्य भएको दिल्लीको राज्य सरकारका
भूकम्पले चर्काएको घर भत्किँदा वृद्धको मृत्यु
नुवाकोट । नुवाकोटमा भूकम्पले चर्काएको घर भत्किंदा एक वृद्धको ज्यान गएको छ । जिल्लको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेस्थित आलडाँडामा मंगलवारराति घर भत्किंदा ८५ वर्षीय कप्तान
इट्टां भट्टा हटाउनुस्, वैकल्पिक पेशा रोज्नुस् ः मेयर मिश्र
भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोम प्रसाद मिश्रले इटा भट्टा व्यवसायीलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्रका इटा भट्टा हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ । नगरपालिकाले आयोजना गरेको इटा
राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणमै विरामी
कंगो । गणतन्त्र कंगोका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फेलिक्स सिसेकेडी सपथ ग्रहण समारोहमै विरामी परेका छन् । सपथ समारोहमा मन्तव्य दिईरहेकै बेला ५५ वर्षे सिसेकेडी विरामी भएर ढलेका
काठमाडौं । सर्टिफिकेट, सवारी अनुमतिपत्र, नागरिकता लगायतका सरकारी कागजात किर्तेगरी नक्कली बनाउँने एक जना पक्राउ परेका छन् । सक्कलीकोे नाम हटाई नक्कली नाम र मिति राखी विभिन्न
पानीमा डुबेर दुई बालबालिकाको मृत्यु
भक्तपुर । भक्तपुर र तेह्रथुममा पानीमा डुवेर दुई बालबालिकाको ज्यान गएको छ । भक्तपुरको चागुँनारायण नगरपालिका ८ सुडालस्थित सरस्वती ईट्टा भट्टामा ईट्टा बनाएको पोखरीमा डुवेर मंगलवार
ज्वालामुखी र आँधीका कारण २ सय २२ जनाको मृत्यु
इन्डोनेसिया । इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी र सुनामीमा परेर दुई सय २२ जनाको ज्यान गएको छ । सुनामीपछि आएको आँधीका कारण सो हताहती भएको हो । इन्डोनेसियाको सुन्डा स्त्राइटको किनारामा
बस दुर्घट्नामा एकको मृत्यु, २५ घाइते
कावासोती । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासीमा बिहिवार भएको सडक दुर्घट्नामा एकको मृत्यु भएको छ । घट्नामा परी २५ जना घाईते भएका छन् । कावासोतीमा बिहान बस अनियन्त्रित भई
आगलागीबाट धनमाल क्षति
भक्तपुर । भक्तपुर र मोरङमा भएको छुट्टाछुट्टै आगलागीबाट करिब ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको छ । भक्तपुर सुर्यबिनायक नगरपालिका ६ धलातेचोकस्थित यादब तिमिल्सिनाको ३ तले
दाङ। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले दाङस्थित १९ नं. बाहिनी अड्डाको निरीक्षण गर्नु भएको छ । निरीक्षण भ्रमणका क्रममा प्रधानसेनापति थापाले सो बाहिनी अड्डाको स्थलगत बस्तुस्थिति,
पूर्व र पश्चिम रुकुममा रेडक्रसलाई सहयोग
रुकुम । पूर्व रुकुम जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले रेडक्रसको नवगठित रुकुमपूर्व जिल्ला शाखाको रुकुमकोटस्थित कार्यालय सञ्चालन गर्न फर्निचर तथा कार्यालय उपकरण उपलव्ध गराएको छ
जेसम साहित्य यात्रा भक्तपुरमा सांसद बस्नेतको कविता र अभिनय बन्यो बिशेष आकर्षण
पुष्कर बुढाथोकी भक्तपुर । जेसम साहित्य यात्राको तेस्रो श्रृंखला भक्तपुरको गाम्चामा कविता र कला सिर्जनाका साथ आयोजना गरिएको छ । यात्रामा कबि फुलमान बल, सुरेश हाँचेकाली, अनन्त
भक्तपुरमा खाना मेलाको आयोजना हुदै
भक्तपुर । भक्तपुरमा पुस ९ गतेदेखि १६ गतेसम्म खाना मेलाको आयोजना हुने भएको छ । सल्लाघारी सपिङ्ग कम्पेल्क्समा आयोजना हुने मेलामा बिभिन्न देशका साथै देशभित्रकै आन्तरिक पक्वानहरुको
माछापुच्छ«े बैंक, यूकेएड सक्षम र हेफर इन्टरनेशनल बीच सम्झौता
काठमाण्डौं । माछापुच्छ«े बैंक, यूकेएड सक्षम र हेफर इन्टरनेशसनल नेपाल बीच संयुक्त सहकार्यमा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिला उद्दमी तथा कृषकलाई सरलीकृत लघुकर्जा दिने सम्बन्धी
विन्दवासिनी खानेपानीको ऋण सम्झौता सम्पन्न
भक्तपुर । विन्दवासिनी बृहत (लिफ्ट) खानेपानी जल उपभोक्ता संस्थाले नगर विकास कोषबाट ऋण लिने भएको छ । भक्तपुरस्थित चांगुनारायण नगरपालिका–९ को बिन्दवासिनी र नगर विकास कोष काठमाडौं
ओस्लामा खेलौना बनाउने तालिम
मध्यपुर थिमि । मध्यपुर थिमि नगरपालिका–४ दथुटोलस्थित ओस्ला बचत तथा ऋण सहरकारी संस्थाले तीन दिने डल (खेलौना) बनाउने तालिमको आयोजना गरेको छ । सहकारीको महिला उपसमितिद्धाराआयोजित
मोटरसाइकल चोरी गर्ने समुह पक्राउ
भक्तपुर । भक्तपुरबाट मोटरसाईकल चोरी गर्ने एक समुह पक्राउ परेको छ । मंसिर १९ गते बिहान चाँगुनारायण नगरपालिका ४ हलचापका धुर्व श्रेष्ठको मोटरसमईकल हराएको उजुरीका आधारमा बुधवार दुई
जबरजस्ती करणी गर्ने खोरमा
भक्तपुर । एक १४ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । सिन्धुपाल्चोक साँगाचोकगढी चौतारा नगरपालिकापा ९ कदमबास घरभई सूर्यविनायक नगरपालिका ९ भाते
प्रधानसेनापतिसँग राजदूतको भेट
काठमाडौँ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत सइद हमदान अल नाक्वीले आईतवार जङ्गी अड्डामा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । भेटका अवसरमा उहाँहरुबीचमा
जुवातास खेल्ने पक्राउ
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका ९ सूर्यमढीस्थित ४५ वर्षीय नुद्देभक्त प्रजापतीको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा प्रजापती सहित ५ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई शनिबार बेलुका
काठमाडौं । साहित्यकार जानु काम्बाङ्ग लिम्बुले एकै साथ दुई कृति सार्वजनिक गरेकी छिन् । ताप्लेजुङमा जन्मिएर बेलायतको एक्सफोर्डमा बसोबास गर्दै आएकी काम्बाङ्ग लिम्बुका एकै साथ
एडिबीद्वारा ३९ अर्ब ३२ करोड सहायता
काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंकले दुईवटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न ३९ अर्ब ३२ करोड सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) अन्तर्गतको
सशस्त्र प्रवक्तामा श्रेष्ठ
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रवक्तामा सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक सुरजकुमार श्रेष्ठ तोकिनु भएको छ । सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्रेष्ठलाई मोबाईल नम्बर
बिदेशी सैनिकको परेड स्थल बन्दै ः गुरुङ
भक्तपुर । नेकपाका प्रमुख सचेतक देब गुरुङले देशी बिदेशी तत्वहरु मिलेर नेपाललाई बिदेशी सैनिकको परेड स्थल बनाउन लागेको आरोप लगाउनु भएको छ । रफत सञ्चार क्लबमा आईतवार आयोजित साक्षात्कार
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका नासमनास्थित शुभकामना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुख्य कार्यालय स्थानान्तरण भएको छ । आफ्नै भवनमा सञ्चालन भईरहेको सहकारी संस्थाले कारोवारलाई थप
बिचौलिया हावी भएपछि कृषिकर्ममा लागे–श्याम बस्नेत
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको चारदोवाटोमा भक्तपुर जिल्लाकै व्यवस्थित र ठुलो तरकारी वजार सञ्चालन हुदैछ । सात रोपनी जग्गामा निर्माण भईरहेको आधुनिक तरकारी वजार दुई महिनापछि सञ्चालनमा
पुग्नै पर्ने धार्मिक पर्यटकीय स्थल सुवर्णेश्वर मन्दिर
भक्तपुर । भक्तपुरको कटुञ्जेस्थित पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वको सुवर्णेश्वर मन्दिर ओझेलमा पर्दै गएको छ । बिक्रम संवत ८९७ मा स्थापना भएको यो मन्दिरमा बिसं १८४६ मा तत्कालीन श्री
काठमाडौं । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–४ चानुवामा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । ५३ वर्षीय चन्द्रबहादुर कार्कीको करेन्ट लागेर शनिबार बिहान मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । आफ्नै घरको कोठामा मल्टिप्लगमा मोबाइलको चार्जर जोड्ने क्रममा करेन्ट लाग्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । ...
नेता जोशीको असामयिक निधनप्रति राष्ट्रपतिद्धारा दुःख व्यक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको...
गल्ती स्वीकार गरेर आए प्रचण्डलाई एमालेमा स्वागत गर्छौं
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले गल्ती स्वीकार गरे माओवादी...
माधव नेपालले भने ‘बालुवाटार नजानू’
ओलीको चेतावनीः बैठकमा नआउनेलाई कारबाही गर्छु
'राजनीति २०७५ जेठ ३ गते अगाडिको अवस्थामा पुग्यो'
'प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्ने नियत छैन् '
धर्म । महर्षि वाल्मीकि आदिकाव्य रामायणका रचनाकार हुन् । उनी संस्कृत साहित्यका महाकवि पनि हुन् । यिनी लौकिक...
अमेरिका । गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउण्डेशन अमेरिकाले शनिवारका दिन निशुल्क खाद्यन्न वितरण कार्यक्रम गरेको छ ।...
‘मः म मज्जा’मा प्रदीप खड्का तारकेश्वरको अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन बन्दै 'कोभिड –१९ च्याम्पियन अफ च्याम्यिन्स' अवार्डबाट छिरिङ राप्के लामा सम्मानित
गुगललाई वार्षिक साढे ५ अर्ब डलर नोक्सान
एजेन्सी । गुगल कम्पनीले आफ्नो क्लाउड कम्प्युटिङ व्यवसायको वित्तीय अवस्थाबारे गहन विश्लेषण सार्वजनिक गरेको छ...
कम्प्युटरको मूल्य २० करोड रुपैयाँ !
काठमाडौं । जब एप्पल कम्पनीका संस्थापक स्टिभ जब्ससँग सम्बन्धित कुनै संस्मरणात्मक सामाग्रीहरु लिलामीका लागि...
नागरिक एप अनेक प्राविधिक समस्या
डाटा ह्याक गर्ने युवक पक्राउ
अन्तरिक्षमा पहिलो पटक मूला फल्यो
एमबाप्पेको ह्याट्रिकमा पीएसजीको शानदार जित
काठमाडौं । किलिएन एमबाप्पेले ह्याट्रिक गरेपछि च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम १६ को पहिलो लेगमा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले स्पानिस क्लब बार्सिलोनामाथि शानदार जित हात पारेको छ । घरेलु मैदानमा बार्सिलोनाले पहिले अग्रता लिएपछि त्यसलाई कायम राख्न सकेन र ४-१ को लज्जास्पद हार व्यहोरेको हो । क्याम्प नोउमा खेलको २७औं...
म्याराथनमा नेपाली सेनाको वर्चश्व
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि आर्मीलाई
खेलमा फर्कियो नेपाली महिला फुटबल टिम
एन्फा साधारणसभाः हलभित्र कार्यक्रम बाहिर भक्तपुरको विरोध
हिमपहिरोमा परी दुई जनाको मृत्यु
एजेन्सी । अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त बादाख्शानको शाकाई जिल्लामा मंगलबार गएको हिम पहिरोमा परी एउटै घरका दुई...
ट्याक्सी चालकलाई दुर्व्यवहार गर्ने युवती पक्राउ
भारतमा हिमपहिरोले १८ जनाको मृत्यु
झडपमा २६ जनाको मृत्यु
अमेजनका प्रमुख कार्यकारी दिएले राजीनामा
दिगो विकासका लागि महिला साक्षरता
वैज्ञानिक आविष्कारमा प्रशासनिक झमेला
विपद् पर्दा टाउको लुकाउने ठाउँ पनि छैन ः शिवशरण खत्री,
वडाध्यक्ष, सुर्यविनायक नगरपालिका–३, भक्तपुर
शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकलाई प्राथमिक्ता दिएको छु, भिम प्रसाद पराजुली नगर प्रमुख बिराटनगर महानगरपालिका
वडामै करोडभन्दा बढी कर उठाउँछौ, तर दश रुपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार छैन : उत्तम थापा
गुण्डागर्दीविरुद्ध अब उजुरी दिनुपर्दैन : उत्तमराज सुवेदी
दूधवालीको सपना यस्तो सपना
मध्यपुर थिमिमा चैत १ गते सम्पदा पदयात्राको आयोजना हुने
मध्यपुर थिमीमा निर्माण हुने शंखधर पार्कमा काठमाडौं महानगरको साथ
रातो मच्छिन्द्रनाथ उपभोक्ता समितिमार्फत पुननिर्माण हुने
भक्तपुर इन्टरनेशनल हस्पिटल संचालनमा
भक्तपुर । भक्तपुर इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रा.लि. संचालनमा आएको छ । मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. ३ कौशलटारमा...
निरोगी जीवनकालागि यसो गर्नुहोस् ट्रेन्डमा हट योगः ४५ दिनभित्र ५० प्रतिशतसम्म डिप्रेशन कम हुन्छ केराको जुसले घट्छ पेट ! दश हजार पाइला हिँड्नुपर्छ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय लिन नसक्दा यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)...
पर्यटकको चाप घट्यो
दमौली । सन् २०१९ मा एक लाख २० हजार पर्यटकले तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरको भ्रमण गरे । सन् २०२० मा दुई लाख ५०...
पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा हेलम्बु गाउँपालिका सक्रिय
ठूलो मात्रामा पटाका बरामद
'अब पर्यटन गतिविधि खुल्ला हुन्छ'
५८ पर्वतारोहीले पाए हिमाल आरोहणको स्वीकृति
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘प्रेम गीत-३’ हिन्दी भाषामा डबिङ गरिएको छ। स्वर्गीय छेतन गुरूङ र सन्तोष...
'मलाई ३ वटा अंगको सर्जरी गर्न भने’
काठमाडौं । नायिका प्रियंका चोपडा आफ्नो पुस्तक ‘अनफिनिस्ड’ सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छिन् । यो पुस्तकमा उनले...
पुष्करले ल्याए 'सनम' युटुवमा सार्वजनिक
भक्तपुर । लोकदोहोरी गायक पुष्कर चोलागाई नयाँ गीत लिएर आएका छन् । ‘सनम’ नामक गीत केही दिन अगाडीमात्र युटुवमा...
‘हामी केही समयदेखि एक अर्काको प्रेममा छौं'
काठमाडौं । केही दिन यता गायिका अञ्जु पन्त निकै चर्चित छिन् । उनको विवाहको कुरा बाहिर आएपछि यस्तो चर्चा हुन...
‘म त मछुी कि क्याहो’ ल्याउदैं ‘धुर्मुस–सुन्तली’
काठमाडौं । चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ रिलिज भएको करिब एक बर्ष भएको छ । यो चलचित्रमा कलाकारद्धय सिताराम कट्टेल र...
फेसबुकबाट २३ लाख ठग्ने नेपाली डायना खोरमा
भक्तपुर । आफु भारत महाराष्ट्र बस्ने भन्दै फेसबुकमा नक्कली आईडी बनाएर २३ लाख ठगीगर्ने एक महिला पक्राउ परेकी...
फेसबुक मेसेन्जरमा अब सजिलै डार्क मोड सुचारु गर्न मिल्ने
फेसबुकले गत महिना फेसबुक मेसेन्जर एपमा डार्क मोड सुचारु गर्न मिल्ने फिचर ल्याएको थियो तर उक्त फिचर सुचारु...
५० वर्षपछि फेसबुकमा भेटिनेछ जीवित भन्दा बढी मरेका मानिसको प्रोफाइल
काठमाडौं । फेसबुकमा मृत मानिसहरुको संख्या तिव्र गतिमा बढि रहेको छ । ब्रिटेनको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले...
कसरी जोगाउने वेबलाई ?
शक्तिशालीहरूलाई मात्र नभई सम्पूर्ण मानव जातिको सेवा गर्न वेबको संरक्षण गर्नुपर्छ, जसका लागि हामीले संघर्ष...
फेसबुक मेसेन्जरमा एकैपटक ५ वटा सम्म एकाउन्ट चलाउन सकिने, यस्तो छ तरिका
काठमाडौं । कयौं मानिसहरु यस्ता हुन्छन की उनीहरु फेसबुकमा एक भन्दा धेरै एकाउन्ट प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर...
क्रिमले अनुहार बिगारिदिएपछि......
गिनी । सौन्दर्य प्रतियोगिताकी पूर्व बिजेताले स्विसको स्किन केयर उत्पादनलाई अदालतसम्म पुर्याएकी छिन् । उक्त...
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा अनुपस्थित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई...
भक्तपुर । भक्तपुरका दुई स्थानमा स्याटेलाइट सिटी निर्माण हुने भएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भित्र...
पोखरा । एक पटककमा एक वा दुई सन्तान जन्मिएको त हामीले सुन्दै आएको हो । तर,स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–१ कि...